Aqriso: Yaa dusha saartay la socodka amniga Cabdi Kariin Muuse Qalbi-Dhagax - Caasimada Online
Home Warar Aqriso: Yaa dusha saartay la socodka amniga Cabdi Kariin Muuse Qalbi-Dhagax
Aqriso: Yaa dusha saartay la socodka amniga Cabdi Kariin Muuse Qalbi-Dhagax
Addis ababa (Caasimada Online) – Dowlada Ethiopia ayaa la xaqiijiyay in si rasmi ah ay ula wareegtay amniga Sarkaalka ONLF C/kariin Sheekh Muuse (Qalbi Dhagax).
Sarkaal ka tirsan Booliska Federaalka Ethiopia oo lagu magacaabo Danyel Musami ayaa sheegay in ka warqabka xaalada amni ee Qalbi dhagax ay tahay mid dusha ka saran dowlada Ethiopia.
Danyel Musami, waxa uu sheegay in damaanada amni ee Qalbi Dhagax ay tahay mid dusha ka saran keliya inta uu ku sugan yahay Ethiopia.
Danyel Musami, waxa uu cadeeyay in Qalbi Dhagax kiiskiisa uu weli yahay mid furan, balse inta harsan ay ka sahlan tahay kuwa laga soo gudbay.
Waxa uu tilmaamay in Booliska Ethiopia uu la socdo xaalada amni ee Qalbi Dhagax, isla markaana xaaladiisa ay u xil saaren dharcad uusan sheegin tiradooda iyo qaabka ay u ilaalinayaan amniga Qalbi Dhagax.
Sidoo kale, Qalbi Dhagax oo kusii jeeda dalka Kenya ayaa laga cabsi qabaa in mudada uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa uu caqabado kala kulmo dhinacyada kasoo horjeeda dowlada ee doonaaya waxyeeleynta Qalbi Dhagax si isku dhac uu uga dhex dhasho ONLF iyo Ethiopia.
Dhinaca kale, dowlada Ethiopia ayaa Qalbi Dhagax ku wareejisay warqad fasax ah oo la sheegay inay amreyso inuu ka dhoofi karo Garoomada Ethiopia.